फल काटन "मयुर", "फल टोकरी", "फल केक" - एक, मूल जादुई स्वादिष्ट र अविश्वसनीय सुन्दर!
हरेक छुट्टी रूसी मान्छे सुन्दर सेट तालिका, जहाँ आवश्यक छ, अन्य व्यञ्जनहरु र फल बीच कटा छ सँगसँगै छ। यो पकवान प्रायः चिसो कटौती संग सेवा छ। निस्सन्देह, तपाईं केवल पकवान मा पुरा फल राख्न सक्छ, तर त्यसपछि पछि भोज एक ठूलो मात्रा bitten स्याउ र नाशपाती, सुन्ताला र Melons को भाँचिएको बोक्रा रहनेछ एक मौका छ। हो, र अधिक सुविधाजनक एउटा सानो संग, पहिले नै स्याउ वा नासपाती, भुईँकटर वा खरबुजा को एक टुक्रा काटेर उपचार गर्न, सुन्तला वा अंगुर दाख स्लाइस को एक टुकडा खाली गरियो।
विशाल भूमिका यो पकवान नाटकहरु सेवा अवकास slicing फल। आखिर, त्यहाँ कलात्मक एक सम्पूर्ण विज्ञान छ तरकारी को काटन र फल भनिन्छ जो नक्काशी।
यस श्रेणीका साधारण पकवान - फल slicing "अन्य फल संग संयोजन मा भुईंकतहर।" यसलाई आवश्यक भुईँकटर, kiwi, स्ट्रबेरी र खरबुजा। खरबुजा खुली कटा, 3-4 सेमी। खरबुजा को टुक्रा मा उनलाई कटौती यसको किनारा साथ एक platter राखिएको प्रत्येक पछि थोडा अघिल्लो एक ओभरल्याप भनेर। दोस्रो तह डट्स kiwi को नै तरिका गरिन्छ। पकवान को केन्द्र मा एक राख्दै यसलाई भने भुईँकटर थाक कटौती। यो तरिकाले कटौती गर्ने protagonist को "तल" को स्ट्रबेरी छरिनु। तपाईं पनि प्रयोग गर्न र यस को लागि अङ्गुर गर्न सक्नुहुन्छ।
कहिलेकाहीं फल slicing ताजा तरकारी संयोजनमा प्रदर्शन। को नक्काशी को प्रविधी प्रयोग गरेर, तपाईँले कला असली काम सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, यो सुन्दर "मयुर" पकवान देखिन्छ।
यसलाई जो देखि शरीर धेरै सेतो चरा कटौती गर्नुपर्छ Daikon, लिन आवश्यक छ। एक पकवान अङ्गुर मा पोख्नुहोस्, मालिक ध्यान "चरा" को एक मुट्ठी को केन्द्र मा स्थापित गर्नुपर्छ र त्यसपछि रमाइलो सुरु - को पुच्छर डिजाइन। पहिलो सुन्तला सर्कल तिनीहरूलाई राखिएको राखिएका छन् सर्कल kiwi र नाशपाती: आफ्नो भूमिका फल slicing द्वारा गरिन्छ। तपाईं पनि मध्यम आकारको स्याउ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र प्रत्येक "पंख" को शीर्ष मा स्ट्रबेरी वा कालो अंगुर संग पहनाया छ।
तपाईं यस्तो लघु बनाउन प्रत्येक "पंख" दांत कोट्याउने सिन्का पियर्स सक्नुहुन्छ फल canapes काठ skewers वा Toothpicks। निस्सन्देह, यो पकवान मा मुख्य विचार फल slicing एक जादुई एक ponytail विस्तार भन्ने तथ्यलाई छ परी-कथा चरा। र पकवान पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री मा प्रयोग गर्न फल वा जामुन कस्तो, यो त महत्त्वपूर्ण छ। राम्रो र स्वादिष्ट थियो कि मुख्य कुरा।
तपाईं पनि मूल को एक प्रकारको गर्न सक्छन् फल केक पनि साथ, जन्मदिन "मोमबत्ती।" मोमबत्ती यहाँ को भूमिका काठ skewers अङ्गुर, स्याउ को आधा स्थापित गर्दै छन्, stably एक platter मा खडा कारण जो मा strung प्रदर्शन। केन्द्र मा एकदम उपयुक्त मैनबत्ती घुम्रेको Daikon छ। केक नै सर्कल फल तहहरू बाहिर राखिएको छ।
स्ट्रबेरी, अङ्गुर, currants, Blackberries वा raspberries: "केक" मा कटा फल जामुन फ्रेम छ।
र अझै धेरै मूल संरचना "फल टोकरी"। को टोकरी गर्न, तपाईं आधा सानो खरबुजा, जो सबै पूर्व-चयन मज्जा को खरबुजा बोक्रा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। को "टोकरी" को स्थिरता लागि एक रिम आकार छ जो खरबुजा को अन्य आधा को बोक्रा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ - एक सर्कल कटौती गर्ने मज्जा देखि एक बाक्लो टुक्रा साफ र तल राखिएको छ। को अडान को बीचमा र नै सेट टोकरी मा। त्यसपछि जामुन छद्मवेषी र फल को स्लाइस मा कटौती खडा। मूल कन्टेनर स्ट्याक अङ्गुर, quartered स्याउ र नाशपाती, सुन्ताला र अंगुर दाख मग को स्लाइस को बीचमा। वास्तवमा, उत्पादनहरु को विकल्प एकदम हरेक महिला आफ्नो लिङ्कमा आफु के गर्न सकिन्छ।
एक उत्सव तालिका साँच्चै एक छुट्टी थियो, तिमी सिर्फ एक सानो सपना आफ्नो विचार महसुस गर्न रूपमा बरु सकेसम्म धेरै प्रयास गर्न आवश्यक छ। र हामी तपाईंलाई मदत गर्न सधैं खुसी छन्!
जहाँ टुला मा विवाह केक अर्डर गर्न?
घरेलु पनिर र चेरी संग एक केक Souffle कसरी खाना पकाउनु
तर पाइ: पूर्वजन्ममा जादु!
फोटो संग व्यञ्जनहरु: leaps र सीमा द्वारा ब्यागेल्स
पेलुस टार्टाइन (ओभरल्यान्ड): विशेषताहरू र ग्राहक समीक्षाहरू
"मोबाइल टिभी" टन: सेवाहरूको समीक्षा, समीक्षा
VAZ-2110: भित्री, इन्जिन, साधन प्यानल बाह्य मिलाउने ट्युनिङ
औषधि "Reduxine": पातलो समीक्षा
संतृप्त hydrocarbons: सामान्य विशेषताहरु, isomers, रासायनिक गुण
मुक्केबाज मा राज्य Grogg
के दबाव माछा काट? मौसम माछा मार्ने लागि
साइफिलिस कसरी छ: रोगको कारणहरू, लक्षणहरू र उपचार
कसरी जीवन को हरेक अवसरमा आफ्नो हातमा एक बिरालो सुन्न बनाउन